Ezi SEO | Martech Zone
Wenezdee, Machị 26, 2014 Douglas Karr
Izu gara aga, enwere m obi ụtọ nke nzukọ Anthony Duignan-Cabrera, onye nta akụkọ, onye nwe ọdịnaya na ahịa dijitalụ nyeere aka kwachie skyrocket na ewu ewu. Jọ tụrụ m mgbe e webatara m dị ka SEO ọkachamara, ọ bụ ezie. Ezie na njikọ aka anyị na onye ahịa a bụ nyocha ọchụchọ, m na-atụ ụjọ n'ihi na ọ na-egosi nkọwa doro anya nke ihe m nwere ike imere onye ahịa ahụ. Ọ bụrụ na ị zute ma ọ bụ gee Anthony ntị, ọ dị oke egwu ma kwuo okwu.
Anthony kwuru ozugbo na SEO achọghị ya. Nzaghachi m… M onwe m kwa!
My nkọwa ọkọlọtọ na folks bụ na SEO na-emeso dị ka mgbakọ na mwepụ nsogbu. Google emeela nnukwu ọrụ na afọ ndị na-adịbeghị anya na-agbanwe usoro dị egwu - ruo n'ókè nke m mara ọkwa SEO nwụrụ afọ 2 gara aga. Plọ ọrụ pundits tiri mkpu (ma ka na-eme) na ọ bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. Ekwetaghị m. Ọ bụ ezie na anyị na-enyere ndị ahịa anyị aka arụ ọrụ nke SEO, anyị kwenyere na ya ezi SEO abụghị nsogbu mgbakọ na mwepụ ma ọlị, ọ bụ nsogbu ndị mmadụ. Ezigbo SEO chọrọ ahịa ọdịnaya pụrụ iche. Marketingre ahịa ọdịnaya pụrụ iche bụ ịmara ndị na-ege gị ntị bụ, ebe ha nọ, otu esi adọta ha, yana - n’ikpeazụ - otu esi gbanwee ha.
Laa azụ na 2011 achọpụtara m mgbe m tụlere saịtị m na ihe ka ọtụtụ nleta ndị dị oke mkpa esiteghị na isiokwu ndị na-ewu ewu nke ukwuu - ma m mgbe adịghị ọkwa ọma na isiokwu nke na-eduga nleta ndị ahụ. Isi okwu ndị dị mkpa dị ogologo-ọdụ na verbose… yana ọdịnaya ndị so ya dị ezigbo mkpa ma sie ike. Egburu m obere oge iji bulie ọdịnaya m maka ọchụchọ ma were oge dị ukwuu n'ịde ọdịnaya ka mma n'oge niile. Azụmaahịa ahụ kwụrụ ụgwọ traffic blọgụ nke ọnụọgụ okpukpu atọ kemgbe oge ahụ.
Inwe usoro SEO n'oge a yiri inwe nnukwu atụmatụ email. Ekwenyere m na ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ịghọta ihe ndị a isi nke njikarịcha search engine dị nnọọ ka ha ga-esi ghọta opt-in email mechanics. Ha abụọ choro ikpo okwu siri ike, mana - a ezi SEO atụmatụ na-adabere na nso nso a, ugboro ugboro, mkpa na ihe na-akpali akpali. Ọ bụrụ na ị nwere nhọrọ abụọ - tinye ego na backlinks na isiokwu njikarịcha… ma ọ bụ tinye ego na mmepe ọdịnaya (imewe, nyocha, edemede, atụmatụ)… ọdịnaya ga-emeri oge ọ bụla.
Ịchọta a ezi SEO ọkachamara siri ike, mana ọ gaghị ekwe omume. Ndụmọdụ m bụ ịdebe ajụjụ ha mgbe ịchọrọ ijide ọrụ ha. Ọ bụrụ na ha amalite site na ịmụ gbasara azụmahịa gị, otu ị si ahazi ụzọ, ihe ọnụ ahịa gị na-edu, bụ ndị ndị asọmpi gị, etu ị si agbanwe, yana ebe imirikiti azụmahịa gị si… ha na-ajụ ajụjụ ndị ziri ezi . Ọ bụrụ na ha, kama, gwa gị isiokwu ndị ị kwesịrị ịkwado ma kwe nkwa maka mgbe ha ga-eme ka ị banye ebe ahụ, pụọ. Ọ bụrụ na ha na-ekwe nkwa peeji nke 1 ogo… gbapụ.
Ezi SEO abụghị maka ogo. Ezi SEO bu banyere ide ihe di oke nma nke achọtara, kwalitere ma kesaa. Mgbe nnukwu ọdịnaya kụrụ na ,ntanetị, ndị mmadụ na-agụ ma kesaa ya. Mgbe ndị mmadụ gụrụ ma kesaa ya, ha na-ekwukwa ya. Mgbe ndị mmadụ kwuru ya, ị ga-enwe ọfụma.
Tags: ezigbo seogoogle +search engine njikarịchaokpu ọchaacha ọcha okpu seo
Usoro nzuzu nke ire ahia weghachitere na ntinye ego